musha nyika dzakabatana Singers Justin Timberlake Hupenyu hweMwana Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
CB inotaura Nhoroondo Yese yeAmerican Celebrity ane zita rezita “JT". Yedu Justin Timberlake Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezvinoitika zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ehe, munhu wese anoziva iye ndeimwe yeanopikisa epasi mifananidzo. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Justin Timberlake's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Justin Timberlake Nyaya Yevechidiki:
Kutanga kuenda, Justin Randall Timberlake akaberekwa pazuva re31st raJanuary 1981 kuMemphis kuTennessee, USA. Ndiye oga mwana akaberekwa mumubatanidzwa pakati paamai vake, Lynn Boman Harless nababa vake, Randall Timberlake.
Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Nyika yeAmerica yerudzi rwevachena neChirungu, Irish, Scottish, Welsh, Dutch, French neGerman midzi aingova nemakore matatu chete vabereki vake pavakarambana. Kutevera kupatsanurwa, Timberlake akarerwa naamai vake kuShelby Forest - nharaunda yemuganhu muMemphis - kwaakakurira asina hama dzekubereka.
Kukura paShelby Sango, sekuru vaTimberlake vakamusvitsa kumimhanzi kunyanya rudzi rwemumhanzi nenziyo saJohnny Cash naWillie Nelson. Mudiki Timberlake akakurumidza kudzidza hunyanzvi nekutevedzera uye munguva pfupi akatanga kuita zvese nyika uye mimhanzi yeEvangeri achiri mwana.
Justin Timberlake Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Mbiri yedzidzo yaTimberlake inosanganisira zvidzidzo zvake paEE Jeter chikoro chepuraimari. Ndichiri kuchikoro akabatanidza vadzidzi pamwe nekuvaka basa mumhanzi. Iye ipapo-gore-re-11 aive achiri mudzidzi wechikoro paakazviratidza paterevhizheni show "Star Search" kuita nziyo dzenyika pasi pezita "Justin Randa".
Akaenderera mberi nekutsvaga paunyanzvi hwake nekuteerera mutinhimira uye mimhanzi yeblues yakaitwa nevekare maartist ema1960 nema70s saAl Green, Stevie Wonder naMarvin Gaye. Kure nemumhanzi, Timberlake akawana gigi rekuita uye aive nhengo yakakandwa mu "Iyo Yese-Nyowani Mickey Mouse Kirabhu" pakati pa1993 na1994. Britney mapfumo uye vatambi Ryan Gosling pamwe naKeri Russell.
Akazotevera kudzidzira kudzidza akaona Timberlake akasarudza-murefu wekufunda masevhisi akapiwa neYunivhesiti yeNebraska High School uye akagamuchira diploma yake makore mazhinji gare gare mugore re2000.
Justin Timberlake Nguva Yekutanga Hupenyu:
Nhoroondo yekuimba kwaTimberlake kwakakosha mukuimba kweKuimba kusvika pagore 1995 paakabatana neboka revaimbi vese-rechirume rakanzi NSYNC iro rakarongedzwa nemukomana webhendi maneja, Lou Pearlman. Chikomana chakatanga basa ravo mu1996 kuEuropean naTimberlake semumwe wevaimbi vakatungamira ndokuenderera mberi nekunyora zvinonyorwa mugore re1998 kuUS nekuburitswa kweye yavo yega zita redhisheni studio yakatanga kutengesa kupfuura 11 mamirioni.
Timberlake achiri kuine NSYNC, akaonekwa muDisney Channel "bhaisikopo" Muenzaniso Wemaitiro "mu1999 uye akashanda neboka remukomana kuburitsa maalbum avo Kwete" Tambo Yakabatanidzwa "(2000) uye" Wemukurumbira "(2001) pamberi iro boka rakapinda hiatus mugore 2002 nekuda kwekuderera mukuzivikanwa. Nekudaro, Timberlake akaita kuti mumwe wake akasimuka stardom akasimba uye akaronga kutasva pairi.
Justin Timberlake Biography- Road To Mukurumbira Nyaya:
Taura nezvechirongwa chaTimberlake cheramangwana rake, akashuvira kuve muimbi ega asi akashaya chivimbo chekutsika iyo nzira. Muchokwadi, Timberlake akanyora iyo "Gone" mu2001 yekurekodha naMichael Jackson asi mambo wepapa akaramba rwiyo.
Kuruboshwe asina sarudzo Timberlake akaendesa rwiyo kuimba yake yekufa mukomana bhendi NSYNC iyo yakarekodha. Nekudaro, Jackson akazofonera Timberlake parunhare kuti ataure chishuwo chake chekurekodha "Akaenda" naye chete kwete neboka revakomana bhendi. Timberlake anozobvuma makore apfuura kuti kuda kwaJackson kurekodha "Kuenda" sedhimba naye kwakapa kuvimba kwakanyanya kwaaida kuenda ega.
Justin Timberlake Biography- Rise To Mukurumbira Nyaya:
Akasimbiswa nekubatana kwake naMichael Jackson, Timberlake akaenda ega muna 2002 nekuita dambarefu rake ega ega "SaNdinokuda Iwe" pa2002 MTV Vhidhiyo Music Awards. Mwedzi yakati gare gare munaNovember 2002, Timberlake akaburitsa dambarefu rake redhiyo studio "Yakapembedzwa" iyo yakatanga panhamba mbiri paBillboard 200 uye yakanyora kunoshamisa kutengeserana kubudirira.
Nekukurumidza kusvika pari zvino Timberlake muimbi akasimba uye mutambi ane rake razvino uye rechishanu dambarefu (panguva yekunyora) ari "Man of the Woods" rakaburitswa pa2nd yaFebruary 2018. Taura nezve ake azvino kuita mukuita, Timberlake akataura anotungamira mutambi muRedWorks Animation yemumhanzi yemitambo "Trolls" (2016) uye akaita chimiro muvhi "Wonder Wheel" (2017). Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Justin Timberlake Hukama Hupenyu:
Justin Timberlake akaroora panguva yekunyora. Tinokuunzira chokwadi nezvenhoroondo yake yekufambidzana uye yekuroora. Kutanga, Timberlake aisazivikanwa kuti akambove nemusikana chero mukadzi asati asangana nemusikana wake Veronica Finn. Justin naVeronica vaive makore gumi nematanhatu uye gumi nematanhatu zvichiteerana pavakatanga kufambidzana pakati pehurongwa hwekunetsana. Ivo vakaparadzana muna 17 mushure mekupedza gore nehafu pamwechete.
Mumashure mekudanana murudo akaona Timberlake date muimbi Britney Spears uyo akatamba nyeredzi padivi pake muDisney dzakasiyana siyana terevhizheni, "Iyo Nyowani Mickey Mouse Kirabhu". Hwavo hwaive hukama hwakagara kwemakore matatu (1999-2002) vasati varambana. Timberlake zvakare aive nerudo stints nevakadzi vanosanganisira Alyssa Milano, Tatyana Ali naCameroon Diaz pakati pa2003 - 2006.
Hukama hunotevera hunotevera hwaTimberlake hwakauya muna 2007 paakasangana nemukadzi wake kuti ave, Jessica Biel kuGolden Globes. Vakatanga kufambidzana mumashure kusvika Ndira 2011 pakauya mishumo pamusoro pekufungidzirwa kwaTimberlake kubiridzira Biel nemutambi Olivia Munn. Kutevera mishumo, Timberlake naBiel vakaparadzaniswa chete kuti vabatanidzwe mwedzi yakatevera. Vakatora hukama hwavo kusvika pamatanho akakura nekubatana muna Zvita 2011 nekusunga pfumo musi wa19 Gumiguru 2012. Muchato wavo unokomborerwa nemwana mumwe chete - panguva yekunyora - anonzi Silas Timberlake (akazvarwa muna Kubvumbi 8, 2015).
Justin Timberlake Hupenyu Hwemhuri:
Justin Timberlake anotenda kubva kune yepakati-yemhuri mhuri yepashure. Tinokuunzira chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaJustin Timberlake:
Randall Timberlake ndiye baba vemuimbi. Akashanda semubati kwaya kwechechi yeBaptist panguva yehudiki hwaTimberlake uye akaparadzaniswa naamai vake paakanga achingova nemakore matatu muchikoro che kindergarten. Zvakadaro, Randall Akachengeta hukama hwepedyo nemuimbi uye akamubatanidza nevamwe nhengo dzemhuri yeTimberlake.
About amai vaJustin Timberlake:
Lynn Boman Harless ndiye amai vaTimberlake. Iye mutambi uye mugadziri anogovera hukama hwepedyo uye hwehukama neTimberlake. Akaroora muongorori wezvemari Harless mushure mekuparadzaniswa kwake nababa vaTimberlake. Pamwe chete, Lynn naHarless vanopa Timberlake rutsigiro rwevabereki rwaanoda.
Nezve hama dzaJustin Timberlake:
Timberlake chete ane hafu-babamunini vakaberekerwa kuna baba vake Randall kubva paakaroora zvakare kuna Lisa perry. Vana vacho vanosanganisira Jonathan Perry naStephen Robert. SaTimberlake, Jonathan ane zvido muindastiri yemimhanzi uye anotengesa kutengeserana kwake sogadziri mimhanzi asi zvishoma zvichizivikanwa nezvaRobert uyo aipinda Lip Lipomb University.
About hama dzaJustin Timberlake:
Vari kure nemhuri yaTimberlake, vanasekuru vake baba vaCharles L. Timberlake naBobbye / Bobby Joice Williams apo babamukuru naambuya nasekuru vake vaive William Silas "Bill" Bomar naSadie Lee Timbs zvakadaro. Zvishoma zvinozivikanwa pamusoro pababamunini vaTimberlake, vanababamunini, muzukuru uye muzukuru wake apo vazukuru vake vasati vazivikanwa mune zviitiko zvine mukurumbira zveupenyu hwake hwepakutanga kusvika nhasi.
Justin Timberlake Hupenyu Hwepamoyo:
Chii chinoita kuti Justin Timberlake abike .. Gara kumashure sezvatinokuunzira maki ehunhu hwake kuti akubatsire kuwana mufananidzo wakazara wake. Kutanga neTimberlake's Persona isanganiswa yeAnazarius Zodiac maitiro.
Iye anoregererwa, akasarudzika, anoraira kuremekedza uye zvine mwero anoratidza zvese nezve hupenyu hwake hwega uye hwakavanzika. Mabasa ake ekuita anosanganisira kuunganidza maseketi, kushepa kwechando uye kusona Timberlake zvakare ane zvido mu basketball uye nhabvu pamwe nekuda kupedza nguva neshamwari uye nemhuri.
Justin Timberlake Mararamiro:
Justin Timberlake ane mutengo unofungidzirwa unodarika $ 115 Million panguva yekunyora. Kwakatangira hupfumi hwake kunobva mumimhanzi yake uye zviso zvemuvhara pamwe nekutsigira apo ongororo yemashandisiro ake emari inoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Chuma chake mumutsetse uyo inosanganisira $ 7.65 million penthouse condominium iri paSoHo Mews. Imba inoviridzira gasi yakatsvagirwa nzvimbo yemoto, mazana masere nemakumi mashanu emamirita emawere, yakagadziriswa-yakaputirwa terata, kicheni modular yakagadzirwa nemukurumbira mukicheni kambani mugadziri Gwathmey Siegel pakati pezvimwe zvinhu zvinoyevedza. Muimbi anotaurawo kuravira kwake kwakanaka mumotokari nekuve neunganidzwa inosanganisira kutasva seJeep Wrangler, Audi A8, Audi Q7, Lexus RX 350, Audi S5 Cabriolet pakati pevamwe.
Justin Timberlake Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Justin Timberlake nyaya yehucheche uye biography pano pane chokwadi chisingawanzo kuverengerwa mubio rake.
Timberlake ine hombe yakakura yekuunganidza shangu dzaasina kumbopfeka dzakadaro kaviri.
Nezve chitendero chake, Timberlake akaberekwa uye akarerwa semuBaptist. Iye achiri kuita chiKristu panguva yekunyora.
Timberlake akahwina rekodhi ye10 Grammy uye akasarudzwa nguva dze38 mubairo uyu.
Haana tattoos uye akarega kuputa paakarekodha "futureS3x / LoveSound". Nekudaro, anonwa zvine mwero.
Kunze mimhanzi, Timberlake ine tambo yekufuka inonzi "William Rast", maresitorendi nemhando yake yetiquila inonzi "901".
Timberlake haanyore pasi rwiyo rwake uye anonzi akaburitsa “Yakasimbiswa” pasina kumbobvira anyora.
Thanks for reading vedu Justin Timberlake Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Yakagadziridzwa zuva: Zvita 22, 2020